अभिनेत्री सिर्जना सुब्बा आमा बन्दै, सार्वजनिक गरिन गर्भावस्थाका तस्बिर - aajakoparibesh
pabitra Friday, November 1st, 2019
काठमाडौं / अभिनेत्री सिर्जना सुब्बा आमा बन्न केही दिनमात्रै बाँकी छन् । पहिलो सन्तानको व्यग्र प्रतीक्षामा घरमै आराम गरिरहेकी उनले गर्भावस्थाको विशेष फोटासुट गरेकी छिन्। प्रकृतिसँग फेसनको समायोजनमा आफ्नो अवस्था झल्काएकी हुन्। प्रकृतिले नारीलाई आमा बन्न पाउने अवसर दिएकोप्रति गर्व गर्दै विभिन्न पोजमा तस्बिर खिचिएको उनले बताइन्। भनिन्, ‘धेरैको मुखबाट सन्तान जन्माउनु परेका कारण आफू करियरमा पछि परेको सुन्ने गरेकी छु। तर, मलाई प्रकृतिले विभेद गर्छ जस्तो लाग्दैन। बरु यो नारीलाई दिएको अवसर हो।’
गर्भावस्थामै रंगमञ्चमा समेत देखिएकी उनी प्रकृतिले दिएको अवसरमा उत्सव मनाउनुपर्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘यो चाहेर आउने समय होइन। त्यसैले यो समयलाई उत्सवका रुपमा मनाउनुपर्छ।’
अभिनास मास्के र क्लु जैनको लेन्समा तेह्रथुमे ढाँका बुटिकका पहिरनसहित सिर्जनाको गर्भवती ग्ल्यामर हेर्नुहोस्:
सुशान्तको मृ’त्युमा हात रहेको भन्दै सलमान खानविरुद्ध मुद्दा दर्ता
सुपरस्टार अमिर खानबारे केही रोचक तथ्यहरु
अभिनेत्री काजल अग्रवाल बिवाह गर्दै
माग्ने, मुन्द्रे भान्टेङ भुन्टिङ, दिपकराज चाहि बुढो छ ! यसपाली त दिपा श्री व्याउने कुरो छ !!
हास्य टेलिसिरियल ‘सक्किगोनी’ भाग २ सार्वजनिक ( हेर्नुहोस् भिडियो